Bing PPC Ads: Maitiro Avanoshanda (uye Enzanisa neGoogle Ads) - WebSetNet
Bing PPC Ads: Maitiro Avanoita (uye Enzanisa neGoogle Ads)
Kana Googling akambokutadzisa, iwe ungangodaro wakawana imwe injini yekutsvaidza inonzi Bing. Iyi injini yekutsvaga inogoneswa neMicrosoft uye inovavarira kupfuura Google nguva dzese. Bing inoda kushandura kutsvagisa kwedhijitari uye kukwikwidzana neyakagadzika yemagetsi indasitiri.
Icho chinangwa chekuda, asi nzvimbo imwechete iyo Bing inozvipatsanura pachayo ndeyayo Pay Pay Click ads kana PPC. Zvinoenderana neyedu tungamirira. Kubhadhara Per Click kushambadza ndeiyi, "fomu rekutsvaga kwekutsvaga (SEM) uko mushambadzi anobhadhara kubaya pane kushambadzira." Mushambadzi anofanira kubhadhara muparidzi pese panoshanya mushanyi nechishambadziro. Mukutsinhana, kushambadza kunowedzerwa kune dhatabhesi reinjini yekutsvaga, iyo inoratidza kushambadzira pese panenge zviripo zvinoenderana neshoko rakatsvakwa nemushanyi.
apo Google Ads inopa yakakurumbira PPC ficha, yeBing ine yakasarudzika bhenefiti iyo inosiyanisa pachayo kubva kune yekutsvaga injini hofori. Uye, kana iwe uri muridzi webhizimusi diki- kusvika pakati nepakati, unogona kufarira Bing's PPC mabhenefiti kupfuura eGoogle.
Mune ino posvo, ngatimboputsa mashandiro eBing PPC mashandiro, pamwe nekuti vanoenzanisa sei neGoogle Ads.
Bing PPC kushambadza kunoshanda pane matatu akakurumbira marinjini eMicrosoft: Bing, Yahoo, uye AOL. Paunoshandisa mishandirapamwe yeBing, zvemukati zvako zvinogovaniswa pane ese mapuratifomu kamwechete. With pamusoro mabhiriyoni mashanu kutsvakurudza kwemwedzi kunenge kuri kuitwa paNetrosoft network, izvi zvinoita kuti Bing PPC ive chinhu chinoshamisa chekutengesa kubhadharwa mishandirapikicha.
Panyaya yekushanda, kushambadzira kweBing PPC kunoshanda zvakafanana kuGoogle kushambadza. Iwe unobhidha pamazwi akakosha zvichibva pahuwandu hwemotokari, ipapo kushambadza kwako kunoratidzwa kana iro kiyi izwi richitsvagwa, uye pakupedzisira, iwe unobhadhara Bing pese panoshanya mushanyi kushambadziro yako. SaGoogle, kopi yako yekushambadzira inogona kuve neanosvika mavara makumi masere uye Bing ine kunyange maturusi ekutsigira ayo anogona kubatsira timu yako kuvaka isingadhuri keyword rondedzero, kuti usatombotambisa mari pazvishambadziro zvisiri kuratidzwa.
NeBing, unogonawo kuisa kunyoresa mafiriji anoratidza kuti uye papi chikwata chichabudiswa. Semuenzaniso, kana iwe uchida kuti chikwata chako chiratidze chete pane zvigadzirwa zvemagetsi, unogona kusarudza sarudzo yemotokari. Kana, kana iwe uchida kuti chikwata chiratidze chete pa Yahoo, unogona kuinyorera kubva kuBing neAOL. Izvi zvinopa tende rako kuchinja uye rinogadzirisa kubudirira kweP PPC.
Bing PPC kushambadzira inopa mukana unouya panguva yezvikwata zvekushambadzira. Izvo zvishoma zvemakwikwi kupfuura Google AdWords, uye vashandisi vayo vanotenga online 36% kupfuura chero imwe injini yekutsvaga. Kunyange Google AdWords ichiri chishandiso chine simba kwazvo, pane zvimwe zvakanaka zveBing zvinoita kuti ive inokwezva kumabhizimusi madiki- kusvika pakati nepakati. Saka, ikozvino zvatiri kuziva mashandiro eBing PPC anoshanda, ngatikurukurei mimwe misiyano yakakosha pakati peBing PPC neGoogle AdWords.
Bing PPC vs. Google Ads
Kunyange zvese zviri zviviri Bing PPC neGoogle AdWords zvichikubvumidza kusefa kunongedzera kushambadziro yako, software yaBing ine yakasarudzika hunyanzvi iyo inoisa parutivi neGoogle. NeBing, unogona kuseta zera mafirita ekutsvaga kwako kushambadzira, saka chete vashanyi veimwe zera boka ndivo vanovaona. Kana, iwe unogona kuseta iyo firita yenzvimbo kuti vashanyi mune chimwe chikamu chenyika vaone zvemukati. Nenzira iyi, iwe uchave nechokwadi chekuti vanokwanisa kutungamira vari kuziviswa kumakambani ako ekushambadzira.
Chimwe chinhu chinokosha chinonzi Bing ine ruzivo mune zvaro zvezvemagariro evanhu. Kuwedzerwa kwehuwandu kune mutsara wekopi pachikwata chako chinoudza mushanyi kuti vangani vatevedzeri vevhidhiyo vebhizimisi bhizinesi renyu rine. Pamusoro peBing, ichi chinoratidza unhu hwako hunotevera maererano ne Facebook, Twitter, uye Instagram. Google AdWords, zvisinei, inogona kukuratidza chete nhamba yevateveri veGoogle +.
Maererano ne Microsoft, Bing inomiririra inopfuura 34% yepasirese yekutsvaga injini yemusika. Izvi zvinoreva kuti mumwe muvanhu vatatu achashandisa Bing pane imwe injini yekutsvaga. Uye, zvinotonyanya kukosha, kushambadzira kweBing's PPC kunogona kusvika mamirioni makumi matanhatu evashandisi izvo Google AdWords isingakwanise.
Panyaya yevateereri vazhinji, Google ndiyo inonyanya kufarira. Asi, izvo hazvireve kuti Bing haina kukodzera mari yako. Bing ine vanopfuura mamirioni e137 vashandisi vanotsvaga dzinosvika mabhiriyoni matanhatu nguva pamwedzi. Vanhu ava vanowanzo kuve vakuru pane vashandisi veGoogle, uye vane mari inodarika $ 100K. Saka, kunyangwe Google iine vateereri vakawanda, Bing inoshanda nevashandisi vane simba rakakura rekutenga.
Apo yakaedzwa ne Blue Corona, Bing PPC yakaona 34% yakakwirira-kupfuurira kuburikidza nehuwandu hweGoogle ads. Uyezve, itsva tsvakurudzo vakawana kuti zvemari uye zvekutenga masevhisi aona kubudirira zvakanyanya neBing PPC. Izvi zvinonyanya kuverengerwa kumaMSN uye Yahoo anozivikanwa maripoti emari, ayo anoburitsa mamwe mazwi akakosha ane chekuita nekutenga pamhepo uye nemabhizinesi marekodhi.
Vashandisi veBing vanowanzove vanobatanidzwa newemasayiti mushure mokunge vashandise zvakare. Mune imwe yebhizimisi, matanho eBing a 56% yakakwira kutendeuka mwero kupfuura Google AdWords. Imhaka yekuti vashandisi veBing vanowanzova nechido mue-commerce uye vari kuda kushandisa mari pamhepo.
Chiratidziro cheAd uye Positioning
Sezvo kune vashomanana vashandisi veBing, zviziviso zvaro zvinowanzoratidza zvakakwirira pane zvitsvakurudzo kupfuura Google AdWords. Zvechokwadi, matanho eBing anooneka 35% yakakwira mumhedzisiro yekutsvaga kupfuura Google ads. Bing inoteedzera Google's keyword nzira yekutengesa, iyo inofarira vashandisi vayo nekuti havafanirwe kukunda iyo Google's hombe mushandisi base. Nemusika weBing une makwikwi mashoma, haufanire kubhida zvakanyanya pamazwi akakosha kuti uchengetedze nzvimbo yako papeji rekutsvaga.
Mutengo Per Click
Nevashambadzi vashomanana vanobhadhara pa keywords, unogona kutarisira kupedza zvishomanana pamashamba ako eBing. Chaizvoizvo, rimwe bhizimisi rakapedza 35% zvishoma pamashamba eBing kupfuura zvaakaita paGoogle AdWords.
Mukutaura kwekutengesa-per-click (CPC), ReportGarden vakawana kuti avhareji CPC yeBing yaive $ 7.99 nepo Google yaive $ 20.08. Sezvo paine mashoma traffic yakazara inoitika paBing, CPC kazhinji haina kudhura. Izvi zvinopa mukana wekuwana yakasimba ROI kana iwe uchikwanisa kuisa capital pazvakakodzera kiyi panguva yakakodzera.
Kana iwe uri kusarudza pakati peGoogle AdWords neBing PPC, ese maturusi anogona kuve akakosha midziyo kune yako timu yekutengesa. NeGoogle, iwe unokwanisa kuwana vateereri vakawanda nevashandisi kubva kune vakawanda huwandu hwevanhu, uye iwe unogona kuvimba kuti zvemukati zvicharatidzirwa pane yakasarudzika injini yekutsvaga. Nekudaro, ino nzvimbo inokwikwidza zvakanyanya, uye uchafanirwa kuongorora mushandirapamwe wako nesimba kana uchida kuona kudzoka kwakanaka pane yako mari. Chikwata chako chekushambadzira chinoda nzira zhinji uye ruzivo rwekuita Google AdWords sosi yakavimbika yekutungamira chizvarwa.
Bing PPC inopa yakaderera-njodzi sarudzo yemabhadharo ekushambadzira akabhadharwa. Iwe uchiri nekwaniso kune vateereri vazhinji, asi kiyi yekubhidha kiyi haina kukwikwidza seGoogle. Iko tradeoff apa ndeyekuti traffic yeBing yakadzikira zvakanyanya pane yeGoogle. Nekudaro, nepo kushambadza kwako kungave kwakamisirwa kumusoro uye kuchidhura zvishoma, zvinogona kunge zvisingaonekwe nevanhu vakawanda. Kukamurwa uku kunogona kuodza moyo kumakambani makuru ane mabhajeti akakurisa ekushambadzira.
Kuti uwane mamwe ruzivo pamusoro pezvikwata zvePPC, verenga izvi PPC maprozano mazano.
Yekupedzisira Nongedzo kuGoogle Ads [Mienzaniso]
17 Google Keyword Planner AlternativeTo Tsvaga Ndarama Yegoridhe 2017 Edition
Nzira Nomwe SEO & PPC Inogona Kushanda Pamwe mu7
Maitiro Ekugadzira Revenue-Kugadzira Google Ads Campaign
YouTube Ads yeVatangi: Maitiro Ekutanga & Kugadziridza YouTube Vhidhiyo Yekushambadzira Campaign
PPC Vs Inobatanidza Kushambadzira - Ndeipi Yakanyanya Kukwirisa ROI
Matipi mashanu akanakisa ekugadzirisa SEO yeBing - kwete Google
Web Marketing Marketing List: 40 Nzira dzekusimudzira Website yako
Zvakanakisisa SEO Zvishandiso 2020 - Inofanirwa Kushandisa Mahara SEO Zvishandiso ZveBloggi
← Gadzira kushandiswa kuburikidza neMicrosoft Teams Nzira yekugadzira QOwnNotes neAppCloud pane Linux →
Hwendefa Mode Mune Windows 11?
Maitiro Ekubatanidza Windows 10 PC Ku iPhone Hotspot
Nzira 5 dzekuchinja Windows 11 Wallpaper
Nzira yekuwana yakarasika Apple Penzura uchishandisa yako iPad (1st uye 2nd gen)
5 Nzira dzekuisa Mapikicha, Mavhidhiyo Pasina Kumanikidza kana Kurasa Hunhu pa Instagram
Haikwanise kuchinja Screen Resolution in Windows 10
Best Tools Kuti Ude Kutaura Kunyorera - Voice To Text Tools